Waa kuma geeljirihii hadda majaraha u haya mustaqbalka Sudan? | Xaysimo
Home War Waa kuma geeljirihii hadda majaraha u haya mustaqbalka Sudan?
Shalay ka dib afgembigii Sudan waxaa la xiray qaar ka mid ah wasiirrada iyo dad rayid ah, sida Ra’iisul Wasaare Cabdallah Hamduuk. Waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay in dowladda la kala diray, sida uu telefishinka Qaranka ka sheegay Madaxa Golaha ciidamada ee Cabdul Fataax Al-Burhan.
Sidoo kale, waxaa Sudan lagu soo rogay xaalad degdegga ah, waxaana la laalay qodobbo ka mid ah dastuurka.
Maxamed Hamdan Dagalo oo loo garanayo “Hemedti”, oo aad uga dhex muuqda golaha, ahna hoggaamiyihii afgembigii xilka looga tuuray Cumar Xasan Al-Bashiir, ayaa ku adkeystay in hannaan si dimuquraadi ah ku dhisan ay dalka uga qaban doonaan doorasho.
Waa kuma Hemedti?
Waxa uu ka soo jeedaa gobolka fog ee ku yaal Galbeedka dalka Sudan, halkaas oo siyaasadda, ganacsiga, iyo colaadduba ay isku dhafan yihiin.
Ninkan oo hormuud u ah siyaasadda dalka Sudan, ayaa horay uga ganacsan jiray geela, kaas oo dagaal u arka fursad uu noqon karo nin hodan ah oo awood badan.
Mohamed Hamdan Dagolo, oo loo yaqaan “Hemeti”, waa ninka labaad ee maanta ugu sarreeya militariga haya talada dalka Sudan.
Balse dhab ahaantii, Hemeti, oo yaraantiisii Iskuulka ka saaqiday ayaa haatan loo arkaa ninka ka dambeeyey rasaasta ka dhacaysa Khartoum.
Dagaal oogahaan ka soo jeeda gobolka Darfur ayaa xukuma kumanaan ciidan ah oo ka mushaar badan kana qalab wanaagsan ciidamada caadiga ah ee Sudan.
Waxa uuna haystaa lacago fara badan oo uu ku maalgaliyo maleeshiyaadkaas – waxa uu leeyahay goobo laga qodo dahabka oo ku yaal buuraha macdanta hodanka ku ah ee Sudan, waxa uuna ku tiirsan yahay saaxiibbo uu ku leeyahay Sacuudi Carabiya iyo xulufo kale oo Khaliijka ku sugan.
Sidee buu ku helay jagadaan?
Jidka uu Hemeti xukunka ka soo fuulay ayaa soo bilowday sannadkii 2003-dii, kaddib markii qabaailka Afrikaanka ah ee madoow ee ku dhaqan gobolka Galbeed ee Darfur ay hubka qaateen oo ay xukuumadda ka soo horjeesteen.
Ciidmada Sudan ayaa halgan u galay sidii ay uga hortagi lahaayeen dagaalkooda ku salaysan ku dhufo oo ka dhaqaaqda, waxa ayna bilaabeen in ay qortaan maleeshiyo Carab ah oo loo yaqaan “Janjaweed” – oo macnaheedu yahay “Jinkii hubka qaatay ee fardaha saarnaa”.
Waagaas, Hemeti waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo 20 jir ah.
Waxa uu sannadkii 1975 ka dhashay Qabiilka Carabta ah ee geelleeyda ah ee Mahamid, waxa uu Iskuulka hoose dhexe ka saaqiday markii uu 16 sano jiray, si uu geela ugu kala dhoofiyo Darfu iyo Chad oo loo sii dhoofin jiray Libya iyo Masar.
Hameti adeerkiis Juma Dagolo, waa hoggaamiyaha qabaa’ilka Carabta ah ee ku teedsan xuduudda u dhexaysa Chad iyo Sudan.
Sannadihii u horreeyey ee khilaafka, Hemeti waxa uu waaardiye ka ahaa kolonyada ganacsiga ee Darfur, halkaas oo uu xoogaa hanti ah ka helay.
Hoggaamiyahaas dhalinyarada ah waxa uu gacan ka agaystay dar dargalinta dagaalyahannada Janjaweed.
Lacag, Xukun iyo dagaal
Si la mid ah sida ragga kale ee ku sugan gobolkaas miyiga ah, Hemeti waxa uu dagaalka u arkay “fursad uu lacag ka samayn karo” ayuu yidhi Alex de Waal, oo ka qayb qaatay wada xaajoodyadii 2006-dii oo uu dhex dhexaadiye ka ahaa waana qoraaga buugga lagu magacaabo “The Real Politics of the Horn of Africa: Money, War and the Business of Power”.
Dawladihii isaga dambeeyey talada dalka Sudan tan iyo sannadkii 1980kii waxa ay ku tiirsanaayeen ciidamo booliis ah oo sida militariga u tababaran.
Dhanka kale ragga maleeshiyaad kaas ka tirsan waxay awood u leeyihiin in “ay bililiqaystaan, xadaan, ay maamulaan dhuka iyo in ay yeeshaan saamayn xoog ah oo “sharciyaysan,” ayuu BBC-da u sheegay De Waal.
Argxan darro miro dhashay
Ol ole lagu argagaxan galinayey dadka rayidka ah, ayaa lagu dumiyey kumanaan tuulo, waxaana dharaar cad la kufsaday haween iyo gabdho da’yar.
Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay in dad kor u dhaafaya 300,000 oo qof ay ku dhinteen qalalaaso halkaas ka dhacay oo sababay cudurro, gaajo iyo macaluul.
Ilaa maantana, dad lagu qiyaaso 5.5 milyan, oo 2.6 milyan oo dad kaas ka mid ah ay carruur yihiin, ayaa wali u baahan gargaar biniaadanimo sida ay sheegtay hay’adda Unicef.
Hase ahaatee hoggaamiyeyaasha maleeshiyaadkaas dawladda Sudan wakiilka ka ah, waxaa u miro dhashay argan darradii.
Sannadkii 2006-dii ayaa dagaallamayaasha Janjaweed waxaa si rasmi ah loogu daray ciidmada ammaanka ee Sudan.
Waxaa la siiyey aqoonsiyo ciidan, dareenka ciidanka iyo mushaar bil kasta ay qaadanayaan, tallaabadaas ayaana qalalaaso ka dhex abuurtay ciidamada.
Balse maleeshiyaadkaas ayaa dareemay in lagu abaal mariyey hawlaha aan fiicnayn ee ay xukuumaddu ka waddo gobolka Darfur.
Dabayaaqadii sannadkii 2007, ayaa Hemeti waxa uu gorgortan la galay xukuumadda Khartoum, asagoo ka helay lacag iyo hub intaba.
Dadka ku xeeldheer arrimaha dalka Sudan ayaa madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Omar al-Bashir, oo dalkaas 30 sano xukumeyey ku eedeeyey in uu taageeri jiray maleeshiyaadkaas.
Omar El-Tayeb Ahmed oo ah khabiir ka tirsan BBC Arabic ayaa qaba,”in dadka aqoonyahanka ah ee reer Sudan ay Hemeti u arkaan musiibo uu abuuray Al Bashir,”
Dagaalka kaddib, Maxkamadda Caalamiga ah ee dambiyada ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ayaa Albshir ku eedaysay dambiyadii ka dhacay gobolka Darfur, waxaana masuuliyaddaas dusha loo saaray ciidamada Sudan.
Al Bahsir oo ka cabsi qaba in la inqilaabo ayaa yareeyey awoodda ciidamada, waxa uuna xoogga saaray hay’adaha Sirdoonka iyo maleeyishaadka.
Sannadkii ayaa ciidamada gaarka ah ee Hemeti laga dhigay ciidamada taageerada deg degga ah (RSF).
Labo sano ka dib, markii uu Al Bashir go’aansaday in uu ciidamo u diro Yemen si uu gacan u siiyo xulufada Sacuudiga, inta badan ciidamadaasi waxay ka yimaadeen RSF.
Sannadkii 2016-kii, waxaa toos u maamulayey madaxweynaha, waxaana lagu guuldarraysatay iskuday lagu doonayey in lagu hoos geeyo wasaaradda difaaca.
Awood aan wax la mid ahi jirin
Marka la eego cilmi baadhis sannadkii 2016-kii lagu sameeyey hubka fud fudud, ciidamada RSF waxaa lagu sameeyey tiro ahaan in ay dhan yihiin 10,000 ilaa 20,000 oo rag ah, waxaana dad qaar haatan ku qiyaasaan 50,000 oo qof.
Ciidamadan ayaa ad uga qalab wanaagsan ugana dhaqdhaqaaq roon kuwa caadiga ah ee dalka Sudan.
Hameti waxa uu leyahay 15 ilaa 20 xero oo lagu tababro ciidmadiisa, inkastoo aanu oggaynayn in uu sheego halka ay ku yaallaan.
Sida uu sheegay De Waal, mid ka mid ah taageerayaashiisa ugu muhiimsan waa Taha Hussein, oo ah madaxii hore ee xafiiska gaar ka ah ee Al Bashir, kaas oo diyaariyey in ciidmada RSF loo daad gureeyo dalka Yemen. waana ninka isku xiray Hemeti, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka.
Hemeti iyo Golaha militariga ku meel gaarka ah ee Sudan ayaa goor horeba bilaabay in ay hal meel uga soo wada jeestaan, dibadbaxayaasha sida dimuquraadiga ah u mudaharaadaya.
Hemeti ayaa ah masuulkii ugu sarreeyey ee markii ugu horraysay taageera dibadbaxyada, balse isla markiiba uu is baddalay waxa uuna sheegay in ay hormuud u yihiin kooxo danleey ah iyo kuwo maandooriyaha ka ganacsada.
In ka badan 100 qof ayaa la dilay kaddib markii ciidamadiisu ay kala eryeen dadka shacabka ah, waxaana tobonaan mayd ah lagu tuuray wabiga Nile, sida ay sheegeen dhakhaatiirka xidhiidhka la leh dibadbaxyaasha.
Hemeti ayaa isu arka in uu yahay ninkii Sudan badbaadin lahaa.
“Haddii aan anigu qaban lahayn jagadaan, dalku waa uu burburi lahaa” ayuu ku yidhi waraysi uu siiyey wargayska The New York Times.